PressReader - Northern Eyethu: 2018-06-26 - Ufuna oy­om­siza ngezin­suku zakhe zokugcina
Ufuna oy­om­siza ngezin­suku zakhe zokugcina
Northern Eyethu - 2018-06-26 - NEWS - Muzi Zin­c­ume
USEKHALELA ukuthola umuntu oy­om­siza ngezin­suku zakhe zokugcina uMnuz Ab­sa­lom Nt­sele waseN­to­bozi, KwaMbonambi ohlala yedwa emzini wakhe wom­x­haso kahu­lu­meni (RDP).
UMnuz Nt­sele (81) ongaboni nhlobo emehlweni uthi isi­fiso sakhe esikhulu ukuthola umuntu ozohlala naye, oyok­wazi ukum­vala amehlo uma es­ed­lula emh­labeni.Isimo sokuh­lala yedwa sen­zeke nge­muva kokushiywa ngunkosikazi wakhe nezin­gane, abamshiya bay­ohlala eNg­welezana, eminyak­eni em­i­ningi eye­d­lule.
‘Noma kungaba umuntu nje we­sil­isa, en­gahlala kwelinye lam­agumbi ku­lo­muzi wami, ngoba mina ngiseben­zisa igumbi elilodwa.
‘Ngiyak­wazi ukuziphekela, futhi ngeke ngibe yinkat­hazo kuye ngoba ngi­hola ne­mali yem­pesh­eni,’ kubeka uNt­sele, ohlala endlini en­ge­nawo ugesi.
‘Ngipheka nge­sitofu se­gesi en­giyigcwal­isa njalo, uma ngi­ho­lile. Uma kodwa isiphelile, ngiz­ibasela phan­dle umlilo, ukuze ngik­wazi ukupheka. Kuyen­zeka kwezinye izikhathi ngiphelelwe wukudla ngaphambi kokuphela kwenyanga. Ngenhlanhla kodwa ng­in­a­ban­gani abangi­sizayo uma sen­gib­hekene nenkinga yend­lala.
‘Ngiyabonga kakhulu ukuthi uNku­lunkulu wangipha aban­gani abane­sihe, na­bang­i­nakile, kanti ukuphila kwami konke kukuThixo,’ kubeka uMnuz. Nt­sele, on­gathan­danga uk­wanda kakhulu ngom­n­deni wakhe.
Khona­man­jalo uMnuz. Amose Mt­shali wase Amangwe Vil­lage, uthem­bise uku­vakashela uMnuz. Nt­sele ukuthola ukuthi ikuphi abangam­siza ngakho. KwaMbonambi blind man is des­per­ately look­ing for com­pan­ion
UMnuz. Ab­sa­lom Nt­sele ongaboni ufisa ukuthola umuntu ozohlala naye